Burmese taste - Iora: Santa Cruz Visit (Part 2) - Mystery Spot
Santa Cruz Visit (Part 2) - Mystery Spot
Mystery Spot အ၀င်
ပန်းပွဲတော်ကနေ ပြီးတော့ နံမည်ကြီးလှတဲ့ Mystery Spot ကိုပြန်သွားကြပါတယ်။ အသွားတုန်းကလက်မှတ်ဘွတ်ကင်းလုပ်ထားတာကို ဖြတ်ရပါတယ်။ တော်တော်ညနေစောင်းနေတာတောင်မှ လူတွေများနေလို့ ကိုယ့်အလှည့်ကျအောင်တော်တော်လေးစောင့်လုိုက်ရပါသေးတယ်။
ကျမက educational message တွေ display လုပ်တာစိတ်ဝင်စားလို့ ကြုံတိုင်းဒီလုိုမျိုးတွေရုိုက်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာလုပ်ရင်လည်း နမူနာယူနုိုင်အောင်ပါ။ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း အမြဲကိုယ်တွေ့ လာတာလေးတွေ ပြပါတယ်။ အသုံးတဲ့ရင်သုံးနုိုင်အောင်ပါ။
Park interpreter ကရှင်းပြနေတာပါ။
အသုတ်လိုက်အလှည့်ကျသွားရတော့ ကိုယ့်အလှည့် မရောက်သေးခင်ဒီနေရာတွေမှာ နားနားနေနေစောင့်နုိုင်ပါတယ်။
ရပ်ရင်ဒီလိုစောင်းနေတယ်။ ဒါပေမဲ့နောက်ကအိမ်ကလည်းစောင်းနေတော့ အမြင်မှားအောင်လုပ်ထားသလုိုဘဲလို့ ထင်မိပါတယ်။
သူတို့ ရှင်းပြတာကတော့ အဲဒီနေရာကို မြေတုိုင်းတဲ့အဖွဲ့ တဖွဲ့ က၁၉၃၉ ခုနှစ်မှာ ထူးဆန်းတဲ့ နေရာတစ်ခုအဖြစ်တွေ့ ရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့။ အဲဒီနေရာဟာ Redwood Forest တွေဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ တောင်ကုန်းတစ်ခုပါ။ အဲဒီနေရာကို ၀ယ်သူဟာ မြေညီကိုသာလိုချင်ခဲ့ပေမဲ့ မြေညီချည့်မရောင်းလို့ အဲဒီတောင်ကုန်းကိုပါထဲ့ဝယ်ခဲ့ရတာပါတဲ့။ အဲဒီနောက်ဝယ်သူဟာ အဲဒီတုန်းက မြေတုိုင်းဆာဗေးလုပ်သူများကိုကူညီရင်းသူတို့ မြေတုိုင်းအဖွဲ့ ဟာ ထူးဆန်းတဲ့ အတွေ့ အကြုံတွေကုိုတွေ့ ကြုံခဲ့ရပါသတဲ့။ သူတို့ ရဲ့ သံလုိုက်အိမ်မြောင်ဟာ အဲဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာတုိုင်းစဉ်မှာ အမျိူးမျိူးပြနေခဲ့တယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ သိပ်သိသိသာသာကြီးတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးတဲ့။ ဒါနဲ့ အဲဒီနေ့ သူတုို့ တောင်အောက်ပြန်အဆင်းမှာ ရုတ်တရက်မူးဝေသလုိုဖြစ်လာပြီး သူတို့ ကို တစ်စုံတစ်ရာက တောင်စောင်းရဲ့ ညာဘက်အခြမ်းဘက်ကို အတင်းတွန်းချသလိုမျိူးခံစားခဲ့ရတာနဲ့ အဲဒီနေရာမှာတင် ထုိုင်ချပြီး နားလိုက်ကြရတဲ့အထိဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ မူးဝေတာသက်သာသလိုဖြစ်တော့ သူတို့ ရဲ့ သံလိုက်အိမ်မြောင်ကို သတိထားပြီး ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ သံလိုက်အိမ်မြောင်က သိသိသာသာကြီးလွဲမှားစွာပြနေတယ်တဲ့။ အဲဒီနေရာမှာ ကြုံတွေ့ ရတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်တွေ ဥပမာ သံလုိုက်အိမ်မြောင်ကပြသင့်သလို မပြတာတွေ၊ မူးဝေသလုိုလို ဖြစ်တာတွေ၊ လူကို တဘက်ကိုအားနဲ့ တွန်းချနေသလိုမျိူးတွေ ဟာ ရူပဗေဒဆုိုင်ရာဥပဒေသတွေ၊ကမ္ဘာ့ ဆွဲအားဆုိုင်ရာဥပဒေသတွေနဲ့သွေနေလို့ဘာကြောင့်ဒီလိုတွေဖြစ်နေရတာလည်းဆုိုပြီး ထူးဆန်းထွေလာပုစ္ဆာတွေဖြစ်လာခဲ့ပါသတဲ့။ (အဲဒီလို ဖြစ်တာတွေကို အောက်ကဗီဒီယိုမှာ မြင်နုိုင်ပါတယ်။)
သူတို့ ကအဲဒီနေရာမှာဆက်ပြီး လေ့လာလေ၊ အံ့သြစရာတွေတွေ့ လေဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်တဲ့။ အချင်း ၁၀၀ ပေအတိုင်းအတာအတွင်းမှာသာအဲလိုဖြစ်တာလုို့ လည်း ဆုိုပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ၁၉၄၀ခုနှစ်မှာ လူအများကိုစတင်ပြသခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လျှို့ ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုတွေကိုလူတွေက လည်းအမျိုးမျိုးပြောဆုိုကြ၊ ယုံကြည်ကြ၊သီအိုရီတွေထုတ်ကြပါသတဲ့။ တချို့ ကလည်း တခြားဂြိုလ်ကနေ ကျလာတဲ့ ဘာမှန်းမသိတဲ့ ပစ္စည်းတွေက မြေကြီးထဲတုို့ မြေပေါ်တုို့ မှာရှိလို့ တဲ့၊ ပန်းကန်ပြားပျံပြုတ်ကျပြီးမြေထဲမှာမြုတ်နေလို့ တဲ့၊ တခြားဂြိုလ်ကလာတဲ့အာကာသယာဉ်ပျံတွေကိုလမ်းပြဘို့ သင်္ကေတအဖြစ် သတ္တုတမျိုးကို လာမြှုတ်ထားတာတဲ့။ တချို့ ကလည်းကမ္ဘာမြေကြီးထဲကကာဘွန်ဒို်င်အောက်ဆုိုဒ်ဓါတ်ကဘာဖြစ်ဆိုလား၊ တချို့ ကလည်း ဒါဟာ ရူပဗေဒသဘောကို အသုံးချထားတဲ့လှည့်ကွက်တဲ့၊ စုံလို့ ဘဲ မှတ်တောင်မမှတ်မိတော့ပါဘူး။
အဲဒီနေ့ ကကံဆုိုးစွာနဲ့ အလွန်ဆူညံစွာနဲ့ တရစပ်မနားတမ်းစကားပြောတဲ့ အင်ဒီးယန်းတစ်ဖွဲ့ နဲ့ (ဘိုးဘိုး၊ ဘွားဘွား၊ ဖုိုးဖုိုး၊ဖွားဖွား၊ ဦးဦး၊ ဒေါ်ဒေါ်၊ ဖေဖေ၊မေမေ၊ ကိုကို၊မမ၊ ညီညီ၊ မောင်မောင်၊ ညီမငေး၊ သားသား၊ မီးမီး၊ မြေး၊မြစ်၊တီ၊တွတ်၊ ကျွတ်၊ ဘု၊စု၊ ခရု၊ အကုန်တဆွေလုံးတမျိူးလုံးအတူလာကြပုံပေါ်ပါတယ်။) အတူတူကျပါတယ်။ သူတို့ ရဲ့ မရပ်မနား စကားပြောသံနဲ့ ရှင်းပြသူအသံဟာရောထွေးနေတဲ့အပြင် ရှင်းပြတဲ့သူက ထူးခြားတဲ့ပွိုင့်တနေရာရာမှာ တခုခုကို လက်တွေ့ ပြပြီဆုိုရင် သူတုို့ ကအဲဒီနေရာမှာ အစုလိုက်သော်၎င်း၊ အတွဲလိုက်သော်၎င်း၊ တစ်ဦးချင်းသော်၎င်း၊ တစ်လှည့်စီ ဓါတ်ပုံရုိုက်လို်က်ကြတာ ကြည့်ရမဲ့အရာကိုကွယ် ကြားရမဲ့စကားကိုမကြားနဲ့ တော်တော်ကို အီစလံဝေသွားပြီး အုိုင်အိုရာတော့ အမြန်ဆုံးအောက်ပြန်ဆင်းချင်စိတ်ပေါက်သွားခဲ့မိပါတယ်။ မှောင်စပျိုးးလာလို့ ဓါတ်ပုံရုိုက်ရတာသိပ်မကောင်းတဲ့အပြင် သူတို့ ကတချိန်လုံး နေရာကျဉ်းကျဉ်းလေးမှာ လက်ဦးမှုတွေယူထားတော့ ကျမရုိုက်လာတဲ့ ဗီဒီယိုကလည်း ဟုိုကွယ် ဒီကွယ်၊ ဓါတ်ပုံတွေကလည်း ဟုိုပြတ်ဒီပြတ်နဲ့ ဖြစ်ရော။ (ဒီလိုဘဲလွှဲချလို်က်တော့မယ်) အခုဗီဒီယိုလေးတွေက အွန်လိုင်းက ရှာပြီးတင်ပေးထားတာပါ။ ဒါမှလည်း ကိုယ်တုိုင်ရောက်သလို မြင်ရမှာပါ။
ဗီဒီယိုတွေထဲမှာ မြင်ရတဲ့အတုိုင်း ဒီအိမ်လေးဟာ တောင်စောင်းမှာမြေပြိုကျပြီးတင်နေခဲ့တာပါတဲ့။ အဲဒီအိမ်လေးမှာလျှို့ ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုတွေကို မြင်တွေ့ ခံစားကြရပါမယ်ဆိုပြီးပြထားပါတယ်။ အထဲကိုဝင်ကြည့်တော့တော့ ဘယ်လိုလုပ်ထားလည်း၊ ဘယ်လိုဖြစ်လည်းတော့မသိပါဘူး တကယ်ကိုဘဲတွန်းချခံနေရသလုိုဖြစ်ပြီး ယိုင်ထုိုးနေလို့ အော်ကြရယ်မောကြဖြစ်ရပါတယ်။ သူငယ်ချင်းကတော့ နံရံပေါ်ကိုအဆင့်လေးတွေကနေတက်ကြည့်ကြည့်ပါတယ်။ သူ့ ကုိုမြင်ရတာတော့ စောင်းစောင်းကြီးဘဲမြင်နေရပါတယ်။
ကျမအမြင်မှာတော့ ဒီလိုအိမ်ကိုတမင်စောင်းပြီးပြထားတာဟာမျက်စေ့ကိုလှည့်စားမှုလို့ ဘဲထင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အနိမ့်ကနေ အမြင့်ကို ဘော်လုံးကတက်လာတာ၊ ရေပြန်စီးလာတာတွေ၊ ညီညာတဲ့မြေလယ်ဗယ်မှာ အရပ်ရှည်သူကပုသွားတာ၊ ပုသူကရှည်သွားတာတွေ ကိုအမြင်လှည့်စားမှုနဲ့ ပြထားတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ ကလယ်ဗယ်အညီပါဆုိုပြီး ရေချိန်ကိရိယာလေးနဲ့ တုိုင်းတိုင်းပြတယ်။ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်ကုိုမျက်မြင်ကြည့်ပြီး အံ့သြရ မယုံနုိုင်အောင်ဖြစ်ရ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာပါလိမ့်လို့ စဉ်းစားရတာတွေကတော့ပျော်စရာအတွေ့ အကြုံတွေပါ။ ချစ်စွာသော သူငယ်ချင်းများနဲ့ စာရှုသူတုို့ လည်းမျက်မြင်ကြည့်ပြီးမှ အဖြေထုတ်ချင်မှာပါ။ အခါအခွင့်သင့်ရင်တော့ သွားလည်ကြည့်ပေါ့နော်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း မြန်မြန်ရောက်အောင် အွန်လိုင်းယာဉ်စီးပြီးသွားကြည့်လိုက်ပေါ့နော်။
ဒီလင့်ကတော့ Mystery Spot ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆုိုက်ပါ။
အဲဒီဆိုက်မှာ ၀င်ကြေး၊ မြေပုံ၊ လမ်းကြောင်းအညွှန်း၊ သူ့ အနီးက တခြားစိတ်ဝင်စားဘွယ်ရာနေရာတွေ နဲ့ လင့်တွေ၊ သူ့ ရဲ့ ရာဇ၀င်၊ အမှတ်တရ ပစ္စည်း အဆုံး ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ View အောက်မှာ သွားကြည့်ရင်တော့ ထူးဆန်းအံ့သြဘွယ်ဓါတ်ပုံတွေ နဲ့ အထက်မှာ ကျမတင်ပေးထားတဲ့ ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်နုိုင်မှာပါ။
ဒီလင့် လေးကတော့အလွန်စိတ်ဝင်စားဘို့ ကောင်းလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ကျမလည်းဒါကိုဖတ်ပြီးသွားမှ ကမ္ဘာမှာအဲလိုမျိုးတွေရှိနေသေးတာသိရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လျှို့ ဝှက်ဆန်းကြယ်ဖြစ်နေရတာလည်းဆုိုတာ သိချင်ရင်ဖတ်ကြည့်ပါနော်။ ကျမလည်းသိချင်လို့ လျှောက်ရှာရင်းတွေ့ လိုက်တာပါ။
အဲဒီကပြီးတော့ Santa Cruz ကိုပြန်သွားပြီး boardwalk ကိုသွားပါတယ်။ မီးတွေ နဲ့ ရုိုလာကိုစတာတွေ အရုပ်ဆုိုင်တွေ၊ မုန့် ဆုိုင်တွေ၊ ခြားရဟတ်လိုဟာတွေ ခလေးကြိုက်တွေ လျှောက်ကြည့်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ရဟတ်လိုဟာစီးချင်တယ်ဆုိုလို့ အမေရိကန်သူငယ်ချင်းမလေးက အဖေါ်လိုက်စီး၊ ကျမနဲ့ အမြဲချိန်းတဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ ကျမ က စောင့်ရင်းဗုိုက်ဆာလို့ မုန့် ဆုိုင်သွားတန်းစီစား။ ပြီးတော့အားလုံးလည်း ဗုိုက်ဆာတော့ စားမယ်လို့ ရွယ်ထားတဲ့ ကုလားဆုိုင်သွားတာဆုိုင်ကပိတ်သွားပြီ။ ဒါနဲ့့မြို့ ပတ်ပြီး စားသောက်ဆုိုင်ရှာတာ အကုန်ပိတ်ကုန်ကြပြီ။ ကိုးနာရီလည်းထိုးတော့မယ်။ နောက်ဆုံး ကံကောင်းစွာနဲ့ ထုိုင်းဆုိုင်တဆိုင်ဖွင့်သေးလို့ အပြေးဝင်ပြီး စားလိုက်ကြတာ တက်တက်ကိုပြောင်ရောခဏလေးနဲ့ ။
တုန်ယမ်းဟင်းချို ခဏဘဲ (လက်ကမငြိမ်တော့ဘူးအစားစားခါနီးဆုို)
ရုိုက်ဘို့ မေ့သွားလို့ ခတ်ပြီးမှရုိုက်လုိုက်တာ။ ဒီပန်းကန်ဘဲမှီလုိုက်တယ်။ ဆောရီးနော်။
ဟုိုလျှောက်ဒီလျှောက်နဲနဲလျှောက်ပြီးတော့ ညဘက်ကြီးပြန်လာကြပါတယ်။ အိပ်ချင်လိုက်ကြတာအရမ်းပါဘဲ။ အိမ်ကိုရောက်တော့ တော်တော်ညနက်နေပါပြီ။
ကဲ...မောလည်းမောပြီ တနေ့ လုံးလျှောက်လည်နေတာ။ အိပ်တော့မယ်။ ဂွတ်နုိုက်နော်။
Santa Cruz လိုက်လည်တဲ့သူတွေ ကိုကျေးဇူးတင်လို့နောက်တခေါက်ပို့ စ်မှာပူတင်း (Flan)လုပ်ထားတာလေးကျွေးပါမယ်ရှင်။ လုပ်နည်းလေးပါပြောပြပါမယ်။ဖိတ်လိုက်ပြီနော် အားလုံးကို။ (မလိုက်ဖြစ်တဲ့သူတွေရောပါပါတယ်နော်)
ချော..အပေါ်က ကြွေပန်းပုံ သူလည်း Begonia တစ်မျိုးပါ။ အောက်က မင်းသားကြီးခေါင်းပေါင်း သူလည်း Begonia တစ်မျိုးပါ။ ပွဲတော်ကပန်းက နောက်တမျိုး အကြီးမျိုးပါ။
photo credit: http://www.aspca.org/Pet-care/poison-control/Plants/begonia.aspx
Posted by Iora at 4:12 AM
Labels: Food, Nature, Travel
ကောင်းမွန်ဝင်း January 7, 2012 at 4:54 AM
ဟိုလျှောက်ဒီလျှောက် ဆိုင်တွေကြည့်ရတာလည်း မိုက်တာပဲ။စိန်နဲ့ ပလက်တီနမ်တွေလား။
Iora January 7, 2012 at 3:21 PM
အစားအသောက်က ခတ်ပြီးသားကြီးဖြစ်နေလို့ အားနာနေတာ။
စိန်နဲ့ ပလက်တီနမ်လားဘာလားတောင်သေချာမရှုိုးလိုက်ရပါဘူးကောင်းရယ်။ အဲဒီတုန်းက လျှောက်ရင်းနဲ့ အုိုက်စကရင်ဆုိုင်ရှာနေကြတာလေ။
san htun January 7, 2012 at 3:32 PM
ထူးဆန်းတယ်..မကောင်းမွန်ဝင်းပြောသလို လျှောက်ပတ်၊ အစားအသောက်ပုံတွေပါ တင်ပေးထားတော့ တကယ်သွားသလိုပါပဲ..ပန်းကလေးတွေက ချစ်စရာလေး..အပင်တွေကို မြင်တိုင်း အပင်စိုက်ချင်တုန်း..လက်ဆိပ်သာ မရှိသာ..:P
မီးမီးငယ် January 7, 2012 at 5:57 PM
မြတ်ကြည် January 7, 2012 at 6:25 PM
မမရေ၊ mystery spot ကို ကြုံရင်တစ်ခေါက်ရောက်ဖူးချင်တယ်။
Iora January 7, 2012 at 7:12 PM
ဟုတ်တယ် ထူးဆန်းတာတော့အမှန်ဘဲ။ ဓါတ်ပုံတွေက မှောင်ပြီးတော်တော်ညံ့လို့ သိပ်တင်စရာတောင်မရှိဘူးကွယ်။
စန်းထွန်းကအပင်စိုက်တာဝါသနာပါတယ်လား။ ကိုယ့်အမေ၀ါသနာပါလို့ ကိုယ်လည်းအပင်စုတာဝါသနာပါခဲ့တယ်။ ခုတော့အင်ဒိုးပန်းအုိုးထုိုးတာဘဲလုပ်နုိုင်ပါတယ်။ ဒါတောင်နပ်မှန်အောင်မထုိုးဖြစ်ပါဘူး။ အဟင်း..
တကယ်ထူးဆန်းပါတယ် ကြုံရတာတော့။ ဒို့ ကရဟတ်စီးဘုို့ နေနေသာသာဒီတုိုင်းတောင်မူးချင်နေတာ။ ဟီး။
တုံယမ်းကအဲတုန်းက တအားဆာနေလို့ သာသောက်လိုက်ရတယ်။ သိပ်တော့ကောင်းဘူးရယ်။
Iora January 7, 2012 at 7:13 PM
Iora January 7, 2012 at 7:18 PM
ကြုံရင်သွားလည်နော်။ အဲဒီမှာတော့ မေးမကွဲလောက်ပါဘူး။ စတာနော်။
မေးကွဲတာအေးတော့နာများနေမလားလို့ စိတ်ပူနေတာ။ အမာရွတ်လည်းမကျန်ဘူးဆိုတော့ စိတ်အေးသွားရသေးတယ်။
subuueain January 8, 2012 at 2:24 AM
အလည်တော့ ရောက်ဖူးချင်သား :)
ညယံ January 8, 2012 at 6:57 PM
အိမ်လေးက ထူးဆန်းတယ်နော် .. အထဲဝင်တော့ရော မမူးဘူးလား .. စောင်းနေတာဆိုတော့ .. ရဟတ်တော့ မစီးရဲဘူး ..အမြင့်ကြောက်လို့ .. ပူတင်းအရမ်းကြိုက် မျှော်နေတယ်နော် ..
Iora January 8, 2012 at 9:07 PM
အိမ်ကစောင်းနေပြီး အထဲဝင်သွားတော့တွန်းချခံနေရသလိုဘဲ။ အချင်းချင်းဖမ်းဆွဲနေကြရတယ် လဲမကျသွားအောင်။ မူးတယ်လို့ တော့မခံစားလိုက်ရဘူး။ လဲမကျအောင်မနဲထိန်းနေရတယ်လေ။ ခက်တာက သူ့ ရဲ့ ကြမ်းပြင်ကလည်း စောင်းနေတယ်လေ။ စောင်းတယ်ဆုိုတာက သူတို့ ကအိမ်က မြေပြိုကျပြီးအဲလုိုစောင်းနေတယ်လို့ တော့ ပြောထားတာဘဲ။
ကိုယ်လည်းအရင်ကအမြင့်မကြောက်တတ်ပါဘူး။ တောင်တွေ တာဝါတွေပေါ်တောင်သွားနေတာ။ ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ မြစ်ကူးတံတားလို အမြင့်ကနေအောက်ကိုကြည့်မိရင်တောင်နဲနဲကြောက်လာသလိုဘဲ။ ဇရာနဲ့ တူပါရဲ့ ကိုယ့်တွက်တော့း)။
စိတ်ချ စိတ်ချ ပူတင်းကို ပို့ တင်ပေးဘို့ အတွက် သေသေချာချာမှတ်ပြီး ဓါတ်ပုံလည်းရုိုက်ထားတယ်။ ဟိ..အပြင်မှာတော့စားလို့ ကုန်ပြီ။
ဘိုဖြူ January 9, 2012 at 1:44 AM
Nyi Linn Thit January 9, 2012 at 4:31 AM
ဒီက တီဗီချန်နယ်လ် တစ်ခုမှာ Mystery spot ထဲကလို အခန်းလေး ဆောက်၊ လူတွေကို အထဲထည့်ပြီး အပြင်က ပရိတ်သတ်တွေ တဝါးဝါး ရယ်နေရတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခု ကြည့်ဖူးတယ်၊ မှတ်မိတာတော့ ၂၀ ဒီဂရီလောက် စောင်းနေပြီ ဆိုတာနဲ့ လူ့ရဲ့ နားထဲမှာရှိတဲ့ ရေပြင်ညီကို ထိန်းညှိပေးတဲ့ အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းက ပြန်မညှိပေး နိုင်တော့ဘူး ဆိုလားပဲ၊ အဲဒီမှာ လူတွေက ဟန်ချက်တွေ ပျက်ကုန်တာလို့ ရှင်းပြတယ်၊ မအိုင်အိုရာပေးတဲ့ လင့်ခ်ထဲမှာ လည်း ပုံနဲ့ရှင်းပြထားလို့ ချက်ချင်း သဘောပေါက် လွယ်တယ်နော်...၊
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တခါလောက်တော့ ရောက်ဖူးချင်တယ်၊ သိတာကတခြား..၊ ကိုယ်တိုင် ခံစားရတာက တခြားဆိုတော့ ရယ်နေရမှာ သေချာတယ်...။း)
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) January 9, 2012 at 10:15 AM
ဝါး အဲဒါ ကြွေပန်းလား
မသိပါဘူး... ဒါဆို အိမ်မှာတစ်အိုးရှိတယ် သိလား.. သူ့အပွင့်ကို ခုမှသေချာ သတိထားမိတာ အိမ်က အိုးကအပွင့်သေးတယ်။ ရေမလောင်းဘဲ ထားလဲ အကြာကြီး အသက်ရှင်နိုင်တယ်။ ဟိုတလောက ခရီးထွက်သွားတာ အပင်တော်တော်များများ သေပြီး သူကတော့ ရှင်နေခဲ့တယ်။
ဒါနဲ့ ဟိုထူးထူးဆန်းဆန်း နေရာကြီးကို စိတ်ဝင်စားလိုက်တာ..
ဒီကလူက ထူးဆန်းတာဆို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူဆိုတော့ အဲဒီနေရာကို လက်တွေ့ သွားကြည့်ချင်လိုက်တာ..
စောင်းနေတဲ့ ပုံစံကြည့်ပြီး တကယ်လား. ဖန်တီးထားတာလား .. လှည့်စားမှုလား ဆိုတာ သိချင်နေတာ။.။
Iora January 9, 2012 at 4:43 PM
ပုံတွေကတော့ မှတ်တမ်းသဘောလောက်ပါဘဲ လှတပတကိုမပါဘူးနော်။
အခွင့်သင့်ရင်တော့သွားလည်ပေါ့နော်။ အနီးတ၀ုိုက်မှာလည်း တခြားလည်စရာတွေရှိပါသေးတယ်။
ဟိဟိဟုတ်တယ် အဲဒါကြွေပန်း။ ကုိုယ့်အိမ်(ခုနေတဲ့အိမ်)မှာလည်းရှိနေတာကုိုယ်လည်း မေ့နေတယ်။ (ကုိုယ်စိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေ)
ချောသာသွားရင် မှတ်တမ်းမှတ်ရာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ စိတ်ဝင်စားအောင်ရေးတတ်မှာ။ သွားတုန်းကကိုယ်ကခရီးသွားတုိုင်းအပျော်မှတ်တမ်းအနေနဲ့ ရုိုက်ရုိုက်လာတာ။ ဘလော့ကိုသတိတောင်မရဘူး။ အဲတုန်းက ရေးတောင်ရေးသေးရဲ့ လားမသိပါဘူး။ ကို်ယ့်စိတ်ထဲမှာတော့ အနဲဆုံးတစိတ်ဒေသကတော့ဖန်တီးမှုလုို့ ထင်ပါတယ်။
Iora January 9, 2012 at 6:26 PM
ဟုတ်တယ်ကျမရှာဖတ်ကြည့်တဲ့ထဲမှာလည်း နားထဲကအဂါင်္ကမညှိနုိုင်လုို့ လို့ ပါတယ်။
ကျမလည်းအဲဒီပုံလေးကိုတွေ့ တော့စာမဖတ်ခင်မှာကို သဘောတရားကို နားလည်လိုက်မိတယ်။ ဒါပေမဲ့အဲဒီထဲမှာ လူတွေယိမ်းထုိုး ဟုိုဆွဲဒီဆွဲ အော်ဟစ်နေကြတာတော့တကယ်ဘဲ။ ရယ်လည်းရယ်ရတယ်။
အချိုပွဲပူတင်း-မက်ဆီကန်ဗားရှင်း (Flan) လုပ်ကြည့်ရ...
ကြက်ဥချဉ်ရည်၊ ဘာလချောင်ကြော်၊ ဆလတ်ရွက်သုတ်၊ ငါးပိ...
Almost Burmese traditional meal